Difaaca Nidaamka Guud ee Difaaca Qashinka | Shiinaha oo Difaaci kara Difaacayaasha Soo Saarayaasha Guud, Shirkadaha Soo Saara
Gacmo gashiga Tijaabada Caafimaadka Nitrile-Bilaashka ah
Tuur Qaliinka Caafimaadka Qalliinka (Sterile)
Dharka ilaalinta caafimaadka, oo sidoo kale loo yaqaanno dharka badbaadada caafimaadka, kahortagga gebi ahaanba, ama kiimikada fayriska. Dharka badbaadada caafimaadku waxaa loola jeedaa dharka badbaadada ee ay adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha iwm) iyo dadka galaya goobo caafimaad oo gaar ah (sida adeegsiga jawiga aadka u daran sida ICU iyo Xaaladda Sterile, dadka gala goobta cudurka, iwm). Dharka ilaalada caafimaadku wuxuu leeyahay carfiye wanaagsan iyo carqalad, wuxuu leeyahay howsha adkeysiga caloosha ...
Iska tuurista ilaalinta guud, oo sidoo kale loo yaqaan dharka ilaalinta, dharka ilaalinta caafimaadka, gebi ahaan difaaca la iska ilaalin karo, ama kiimikada fayriska. Dharka badbaadada caafimaadku waxaa loola jeedaa dharka badbaadada ee ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, nadiifiyeyaal, iwm) iyo dadka galaya goobo caafimaad oo gaar ah (sida bukaanka, booqdayaasha isbitaalka, dadka soo gala aagga cudurka qaba, iwm.) . Dharka ilaalada caafimaadku wuxuu leeyahay hawo wanaagsan iyo carqalad, waxay leedahay ...
Xaraashka Tuka-tuurka ee la Tuuri karo oo loo yaqaanno ka-ilaaliyayaasha ilaalinta ee aan-caafimaadka ahayn waxay muhiim u yihiin badbaadada isticmaalaha iyo hufnaanta deegaanka shaqada. Dacwadahayaga go'itaanka ee la adeegsan karo waxay bixiyaan raaxo macquul ah iyo ilaalin heer sare ah isla waqti isku mid ah. Qalabka iyo Muuqaalka: 100% dharka PP-ka ee aan laga tolanayn, Neefsashada, culayska fudud iyo sheyga dabacsan, guryaha ka hortagga. Dharka dhexda ku dhegan ee is-dheellitirka u habboon habboon. Xirmooyinka safka hore ee xasiloon oo habboon